ဓမ္မ: ပြီးရင် လက်တို့
ဦးမောင်ခိုင်လေးတယောက် မထင်မှတ်ဘဲ အမျိုးသားညီလာခံ ကိုယ်စာလှယ်ဖြစ်လာ သည်။ မတက်ရင်မဖြစ်တာမို့ မငြင်းရဲဘဲတက်နေရသည်။ ဘာတွေဆွေးနွေးသည်ကိုတော့ စိတ်လည်းမ၀င်စား၊ နားလည်းမလည်။ ပြသာနာက နေ့လည်စာစားပြီး တရေးတမော အိပ် တတ်သည့် အကျင်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ဆွေးနွေးချက်များပြီးဆုံးသွားတိုင်း ဘေးလူကို လက်တို့ခိုင်းထားရသည်။ ကံကောင်းသည်မှာ ဘေးလူက နေ့ခင်းမျက်စိကြောင်နေပြီး အိပ်မပျော်တတ်။ ဒီနေ့လည်း ဦးမောင်ခိုင်လေး ညီလာခံတက်နေသည်။ နေ့လည်ပိုင်းအစီအစဉ်တွင် ထုံးစံအတိုင်း အိပ်ပျော် နေသည်။
မြန်မာ့ရုပ်သံအဖွဲ့သားများ ညီလာခံပြီးဆုံးကာနီပြီမို့ မှတ်တမ်းလာရောက်ရိုက်ကူးသည်။ ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်များဖက်ကို ကင်မရာလှည့်လိုက်သည်။ နဘေးမှလူက ဦးမောင်ခိုင်လေးအိပ်ပျော်နေပုံပါသွားမှာစိုးသည်။ ထိုကြောင့် ဦးမောင်ခိုင်လေးကို လက်တို့ လိုက်သည်။
ဟေ့လူ …. ဟေ့လူ ထ ၊ ထ
အစီအစဉ်တခု ပြီးသည်ထင်၍ ထုံးစံအတိုင်း နိုးနိုးချင်း ဦးမောင်ခိုင်လေးတယောက် လက်ခုပ်ကောက်တီးလိုက်သည်။ ထူးခြားသည်က ခန်းမဆောင်ကြီးတခုလုံးမှ ကိုယ်စာလှယ် များအားလုံး လက်ခုပ်လိုက်တီးလိုက်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
သြော် …. သူတို့လည်း အိပ်နေကြတာကိုး။
စက်တင်ဘာလ ၃ရက်၊ ၂၀၀၇